Uphi Instagram ngqo Direct ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Iphi i-instagram ngqo
Juni 30, 2019 0 IiCententarios 1164
Zininzi izinto eziguqulwe apho i-instagram ingenise kwiqonga layo. Ukusukela oko uFacebook ethenga i-instagram kwi-2012, uthotho lwezinto ezenza i-instagram ukuba ibe yintoni namhlanje bajoyine iqonga. Iimpawu ezinjengamabali e-Instagram ziye zaba yinto ethandwayo yomsebenzisi. Enye yemisebenzi ye-Instagram yinkonzo yayo yokuthumela imiyalezo ngokuthe ngqo. Iminyaka eliqela edlulileyo ukusukela ku-instagram kukho inethiwekhi yemiyalezo. Kodwa iya phi ngqo i-Instagram?
Imiyalezo ye-Instagram yenza lula unxibelelwano phakathi kwabasebenzisi. Engasadingeki ukuba ushiye i-instagram kwaye ufake usetyenziso lomyalezo ukuze wabelane nabahlobo. Into ayenzileyo kwi-instagram kunye nokuphila kwakhe, iyafana ne-Facebook kunye neMessenger yakhe. Kuba abasebenzisi bayazi ukuba imiyalezo inokuthunyelwa kwi-instagram ngoku bayabuza iphi ngqo kwi-intanethi.
Ngaba ungathumela imiyalezo yabucala kwi-instagram?
Oko yaqala ukwenzeka i-instagram ivumele abasebenzisi bayo ukuba banxibelelane. Ngenxa yokuba izimvo zenziwe kwaye ndiyazithanda. Umsebenzisi anokuzibonakalisa ekucaciseni kushicilelo ngaphakathi kweqonga. Kodwa, ezi zimvo okanye imiyalezo yayiye esidlangalaleni. Ngokungafaniyo namanye amaqonga e-instagram, ebengenalo nesibindi sokwenza eyakhe imiyalezo. Ngaphambili i-Facebook yayiyenzile kunye noMyalezo wayo yayiphumelele kunye nabasebenzisi bayo.
Xa ukuthengwa kwe-instagram kwenziwa nguFacebook (nabo abanini beWhatsApp) inani elithile lemisebenzi emitsha kunye nohlaziyo lwadityaniswa eqongeni. Phakathi kwemisebenzi emitsha edityanisiweyo yimiyalezo ngqo okanye i-instagram ngqo.
Uyifumana njani i-instagram ngqo
Njengayo yonke into ekwi-instagram, uyilo lwenkonzo yalo yokuthumela imiyalezo ilula kwaye kulula ukuba abasebenzisi ukuba bayiqonde. Zombini inkqubo yokuthumela umyalezo kunye nokufumana iphi ngqo kwi-intanethi Kulula kakhulu. Emva koko siza kukubonisa ukuba ungayifumana njani iphi ngqo kwi-intanethi ngaphakathi lokusebenza
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukunxibelelana nge-intanethi kunye nokufikelela kwiakhawunti yakho ye-instagram kwisixhobo sakho esiphathwayo.
Nje ukuba ungene kwiakhawunti yakho uyakufumana ukuqala kwephepha.
Kwesi siqalo kukho imenyu ephezulu. Apho unokufumana ikhamera apho ungangena khona kwimenyu yokushicilelwa kwamabali e-Instagram. Uya kubona kwakhona igama le-instagram, elinye i-icon, elivela kwi-IGTV. Okokugqibela uyakubona kwikona ephezulu yephawu lomfanekiso wendiza yephepha, iphi ngqo kwi-intanethi.
Isebenza ngqo kanjani i-instagram
Inkonzo yokuthumela imiyalezo ngqo kwi-instagram isebenza ngokulula kwaye ivumela umsebenzisi ukuba anxibelelane nabanye. Ukusebenza kwemeko yabucala ye ngokuthe ngqo Isebenza ngendlela efanayo neakhawunti. Ngaphakathi kwe-instagram kukho iintlobo ezimbini zeeakhawunti, zabucala kunye noluntu. Uhlobo lokuqala lwe-akhawunti luvumela umsebenzisi ukuba alawule abo bamlandelayo, ubone iiposti zakhe kunye neprofayili, ekuphela kwabantu abanokubona ukutya kwakhe ngabo bamlandelayo. Ukulandela omnye umsebenzisi ngeakhawunti yabucala, kubalulekile ukuthumela isicelo sokulandela. Ukuba isicelo samkelwe ungawubona umxholo wayo.
Uhlobo lwesibini lweakhawunti loluntu, abasebenzisi abaneeakhawunti zikawonkewonke banokulandela naliphi na omnye umntu ngaphakathi kwe-Instagram. Iprofayile yakho inokujongwa ngabo bonke abasebenzisi be-instagram. Izithuba zakho zinokuphawulwa nangubani na.
Zombini i-instagram ngqo kunye namabali zisebenza ngokwemigaqo yemfihlo ekhethwe ngumsebenzisi. Xa umyalezo uthunyelwa kumsebenzisi, kwaye une iakhawunti yabucala. Okokuqala, isicelo sithunyelwa ukuba samkele umyalezo. Xa isicelo somsebenzisi samkelwe, banako ukuqhubeka nokufumana imiyalezo kubo. Ukuba uyaliwe okokuqala, ngekhe ufumane umyalezo ovela kulowo msebenzisi.
Isicelo sokufumana umyalezo sisebenza nakwiakhawunti yoluntu ukuba useto lomsebenzisi luyayifuna. I-Instagram ngqo ayisebenzi kuphela ukuthumela imiyalezo kumntu omnye, ungayenza nabantu abali-15 ngexesha. Unokuthumela amabali, upapasho olwakho nolwabanye abasebenzisi.
Thumela iimpapasho ezivela kwi-instagram ngqo
Ukuthumela iimpapasho, bobabini bakho kunye nabanye abasebenzisi akufuneki bazi iphi ngqo kwi-intanethi. Yintoni eyimfuneko ukuze wazi ukuba uyipapashe phi kwaye phi. Siza kukuchazela apha ngezantsi. Ukwenza oku kufuneka ulandele la manyathelo:
Ukuqala kufuneka ungene kwi-imeyile kwi-imeyile kwifowuni yakho.
Yiya kupapasho ofuna ukuthumela kulo (Inokuba yeyakho okanye eyomnye umntu).
Kuba i-instagram ngqo yayihlanganiswe kwiqonga kupapasho ngalunye i-icon entsha iyabonakala. Olu luphawu olubonisa iphi ngqo kwi-intanethi.
Ukuthumela upapasho olo, kufuneka ucofe i-icon yeplanethi yephepha esecaleni lasekunene le icon yezimvo.
Xa i icon icinezelwe, imenyu iya kuvela ngenjini yokukhangela kunye noluhlu lwabo bonke abantu obalandelayo. Ungamkhangela umntu kolu luhlu okanye ubhale amagama abo. Njengoko kuchaziwe ngaphambili, ungawuthumela umyalezo kubantu be15.
Nje ukuba uthathe isigqibo ebantwini okanye kubantu ofuna ukuthumela umyalezo kubo, cofa uthumele kwaye ugqibile.
Ungayithumela kanjani imiyalezo kwi-instagram ngqo
Ukuthumela umyalezo osuka kwi-app oyifunayo iphi ngqo i-instagram. Emva koko yenza oku kulandelayo:
Jonga imenyu ephezulu ebekwe ngqo kwi-intanethi.
Kule menyu igama lakho lefayile livela kwikona ephezulu ngasekhohlo, kunye ne-icon yekhamera kunye neyokugqibela enepensile kwikona ephezulu ngasekunene. Cinezela.
Inketho yomyalezo omtsha iya kuvela.
Icandelo lokucebisa kunye neinjini yokukhangela ziya kuvela.
Khetha umntu okanye abantu abakuluhlu okanye ujonge kubo.
Nje ukuba umntu okanye abantu ofuna ukuthetha nabo bacinezelwe, isangqa siya kujika luhlaza okwesibhakabhaka ecaleni komsebenzisi. Inketho yengxoxo kwikona ephezulu ngasekunene nayo iya kujika ibe luhlaza.
Ukuba sele unomntu olungele umxholo cofa incoko.
Incoko iya kuvela. Ukusuka apho ungathumela umyalezo, ifoto, igif, audiyo okanye intliziyo.
Yenza into oyifunayo kwaye cinezela ukuthumela.
Ziphi iincoko zam
Ukufumana iincoko zakho kufuneka uqale wazi iphi ngqo kwi-intanethi. Nje ukuba uyazi le nto, ekufuneka uyenzile kukungena kuyo. Imenyu ephezulu esithethe ngayo ngasentla iya kuvela ngokukhawuleza, ukusuka apho ungathumela khona imiyalezo emitsha. Uya kubona kwakhona injini yokukhangela. Kwaye izicelo zemiyalezo ukuba unayo. Ekugqibeleni uza kubona uluhlu nazo zonke iincoko onazo.
Inkqubo yokucima imiyalezo ilula kakhulu. Ukucima umyalezo kufuneka ungene ngqo kwi-intanethi. Emva koko khetha loo ncoko ufuna ukuyilahla kwaye uyiyeke icinezelwe, emva koko ukhetho lokucima umyalezo luya kuvela. Ukhetho lokuthumela imiyalezo yomsebenzisi kunye nengxoxo yevidiyo engevayo iya kuvela.
Ndingayifumana imiyalezo evela kumntu ovaliweyo?
Abantu abaninzi banomdla wokwazi ukuba banokufumana imiyalezo nge-imeyile ngqo evela kumntu ovaliweyo. Kwimeko apho ibinguwe obezakuphelisa utshilo umsebenzisi impendulo yile: ewe. Njengomntu uthintelweyo okanye angaboni amabali akho, nika izimvo okanye njengeempapasho ozenzayo.
I-Instagram ngqo kwiinkampani
I-Instagram liqonga elihle lokunceda amashishini, amakhulu namancinci. Uhlaziyo ngalunye olutsha, uqinisekisa kuphela umdla wakhe wokubanceda. Ngokudityaniswa kwe-instagram ngqo. Bobabini abancinci kunye noosomashishini abakhulu bafumene uncedo. Ukusuka kwinkonzo yokuhambisa inkundla unganxibelelana ngakumbi nabathengi kunye nabathengi abanokubakho. Ukudala ubudlelwane bokuthembana okukhulu phakathi komthengisi kunye nomthengi.
Phakathi kohlaziyo olutsha lwe-instagram lwalo nyaka, olunye uncedo kwiinkampani lubandakanyiwe, njengoko izinto zinokuthengwa kwi-app.
Ayinamsebenzi ukuba iakhawunti yomsebenzisi yeyasesidlangalaleni okanye yabucala. Ukuba umsebenzisi woluntu unesicelo somyalezo kwiisetingi zabo, akakho omnye umsebenzisi onokuthumela imiyalezo ngaphandle kokufumana isicelo kuqala. Izicelo zomyalezo ziquka uhlaziyo lwe-instagram oluvumela umsebenzisi ukuba afumane isicelo sokufumana imiyalezo komnye umsebenzisi.
Izicelo zemiyalezo zingafumaneka ngokungena kwi-instagram ngqo. Izicelo ziya kubonakala ngezantsi kweinjini yokukhangela. Ukungena kuzo kuya kubonisa uluhlu lwazo zonke izinto ezithunyelwe kuwe. Izicelo ziya kubonakala zodwa kwaye ukhetho lokuzikhaba zonke ngezantsi. Uya kufumana kwakhona i icon kwikona ephezulu ekunene ukukhetha ngaphezu kwesicelo esinye. Ukuba ufuna ukwala kuphela izicelo ezimbalwa, cofa i icon yokhetho kwaye ucime. Ukucima isicelo esinye kuphela, cofa ubambe kwaye ukhetho lokucima luya kubonakala.
Ukususa zonke izicelo kufuneka ucinezele zonke.
1 Ngaba ungathumela imiyalezo yabucala kwi-instagram?
2 Uyifumana njani i-instagram ngqo
2.3 3 nyathelo
3 Isebenza ngqo kanjani i-instagram
4 Thumela iimpapasho ezivela kwi-instagram ngqo
4.1 1 nyathelo
4.2 2 nyathelo
4.3 3 nyathelo
4.4 4 nyathelo
4.5 5 nyathelo
4.6 6 nyathelo
5 Ungayithumela kanjani imiyalezo kwi-instagram ngqo
6 Ziphi iincoko zam
7 Cima incoko
8 Ndingayifumana imiyalezo evela kumntu ovaliweyo?
9 I-Instagram ngqo kwiinkampani
10 Izicelo zomyalezo
Funda ngendlela yokunxiba iimpahla zodliwanondlebe